Burundi: Nyika ine simba yekushanya inokwanisa |
Location: musha » Kutumira » Newsletter » Burundi: Nyika yehunyanzvi hwekushanya
Burundi: Nyika yehunyanzvi hwekushanya
Burundi yakagadzirirwa kuva chipo chekushanyirwa cheEast Africa.
Iyi ndiyo nzira iyo Dr Marina Novelli, mudzidzisi mukuru uye nyanzvi mukusimudzirwa kwekushanya kubva kuYunivhesiti yeBrighton, UK anofungidzira kusimudzira kwekushanya munyika. Panguva yekushanya kwake, akatora ongororo yekukurumidza yeiyo chinzvimbo chekushanya uye kugona kusimukira.
"Nyika ine zvisikwa zvisingagumi, tsika nemagariro uye kuchengetedzwa kuri kukura hakugone kupotsa mukana wekutarisa mukushanya senzira yekusiyanisa hupfumi hwayo nekushandisa zviwanikwa," akadaro Novelli.
Akakokwa nevadzidzi vake vaviri vekare, Justine Kizwera naCarmen Nibigira, avo vachangodzokera kuBurundi kunoshanda mubazi rebasa uye bhizinesi rekushanya, Dr Novelli vakapedza vhiki mbiri muBurundi vachiita chidzidzo chemukana wekuvandudza kushanya.
Akatarisa kuongororwa kwenzvimbo dzavepo uye dzinotarisirwa dzevashanyi, hunyanzvi hwevashandi uye nzira dzekuvaka cheni inokosheswa yekushanya iyo inobatsira munharaunda yakafara.
Chikamu chazvino chinozivikanwa nekutonga kwekushanya kwebhizinesi, nekutandara kwekuzorora kunonyanya kusunganidzwa nekuwedzera kwemusika wepamba, vashanyi vanobva mudunhu reEast Africa uye nharaunda inogara kunze kwenyika.
Parizvino, chikuru chigadzirwa chekushanyirwa igungwa reLake Tanganyika iro riri kuwedzera kushongedzerwa nezvivakwa zvekugamuchira vaenzi uye mamwe masevhisi kushandira iri kuwedzera kudiwa kwekutandara nedziva.
Musika wepasi rose uchiri wakawandisa uye munzira dzakawanda uchikanganiswa nemazano asina kunaka ekufamba akaburitswa nemaofficial ekushanya ekunze.
Novelli aifanira kuwana kushamisika kunofadza paakasvika munyika ino diki asi ine hunyanzvi. Hupenyu husiku hunofadza hune maresitorendi matsva, maresitorendi, bhaisikopo, hapana kana ichienzaniswa nezvaaitarisira nepo kune dzimwe nzvimbo dzekuAfrica aigara achimanikidzwa kuenda kukamuri yake yehotera nekuda kwezvikonzero zvekuchengetedza.
Munguva yekushanya kwake kumusoro-nyika, akawana akasiyana masayiti izvo zvakamuita kuti atsanangure nzvimbo iyi se'nyika ine mikana ine simba '.
Purazi inogadzira chizi, Fromagerie Saint Ferdinand pedyo neNgozi; mushandirapamwe wekugadzira huchi, Grenier de Miel; mweya unotora nzvimbo yekuridzira ngoma, Gishors padhuze neGitega; workshop yekugadzira huni, Lazar Rurerekama; kutarisa shiri kuchamhembe kwedunhu - Lac Aux Oiseaux; matsime anopisa uye mvura inodonha padhuze neRutana; pekugara-pekugara pekugara uye chikafu chinogadzirwa pamba kuGitega; misha inoshanda pamwe nemisha yekumaruwa; kungodudza mashoma, aive pakati penzvimbo dzinokwezva dzakashanyirwa. Novelli yakatarwa seyakakosha yekushandura Burundi kuti ive nyaya inobudirira yekushanya nekukurumidza kuvandudzwa kwezvirongwa zvekudzidzisa kupindura kune iri kuwedzera vaenzi uye chikamu chekushanya; kuvandudzwa kwechikamu ichi kunoenderana nehurongwa hwekuchengetedza ivhu kuenderera; kuchengetedza nharaunda uye iro rakakosha basa rinofanira kuitiswa nenharaunda dzekumaruwa.
Muchirevo umo kushanya kuri chikamu chinokwikwidza zvakanyanya, chero nyowani nyowani kwairi kuenda inoda kupa kukosha kwakanyanya kune vashanyi kuburikidza nekupihwa kwakanakisa kwemasevhisi uye dzakasiyana-siyana zviitiko zvezviitiko; uye izvi hazvichakwanise kuitika pasina mabhenefiti emuno akajeka.
Nzira dzekupedzisira dzeNorth West Airlines dziri kubviswa svondo rino
Vashanyi veTaiwan vanoshandisa US $ 4.5 bhiriyoni muPRC
Jamaica Tourism iri Kuwedzera Mushure meCOVID-19
Paradhiso Inoenderera Kuratidzwa paReggia di Caserta
FDA Mvumo yeKurapwa Kutsva kweAdHD muVakuru
Dusit International inodoma Mutevedzeri weMutungamiriri Mukuru mutsva -...
Gingko biloba inoderedza kukuvara kwemoyo
Chokwadi nezve itsva Batam Marriott Hotel Harbour...
Healthcare Flooring Market Outlook Inovhara Bhizinesi Idzva...
Iyo Bahamas Relaxes Protocols seCOVID Nyaya Dzinoderera
Oneworld Alliance kutenga anosvika mamirioni mazana maviri ...
Western Air Inovhura Ndege Pakati peNassau ne...
Vatungamiri veSkal Asia Vanogamuchirwa paChiso neChiso mu...
Air Transat nePorter Airlines vanosaina kodhi nyowani yekugovana ...
Thomas Cook India anowedzera muGujarat
Forage Mbeu Musika Saizi NeVatambi Vakakosha, Makwikwi...
Australia neNetherlands: Russia inofanirwa kubhadhara ...
Rwanda inosimudza masiki ekunze senge COVID-19 nyowani ...
Global Parallel Robotic Gripper Market Analysis ne...
Putin akangotyisidzira West nehondo
Bulk Chikafu Ingredients Musika Inocherekedza Budiriro...
Wanted! Vhidhiyo Yako Yakanakisa Yekushanya